Rabshado xoog leh oo ka socda Qudus iyo Falastiiniyiinta oo gubey calamada Mareykanka iyo Israel+Sawirro | Somali National Television - sntv.so
Home WARARKA MAANTA Rabshado xoog leh oo ka socda Qudus iyo Falastiiniyiinta oo gubey calamada...
Rabshado xoog leh oo ka socda Qudus iyo Falastiiniyiinta oo gubey calamada Mareykanka iyo Israel+Sawirro
Qudud(SONNA) Kumanaan shacabka muslimiinta reer Falastiin ayaa bilaabay bannaan baxyo looga soo horjeedo go’aanka madaxweynaha Mareykanka Donald Trump uu magaalada Qudus ugu aqoonsaday in ay tahay caasimadda Israel.
Waddooyinka waaweyn ee magaalada Qudus waxaa lagu arkayaa dadweyne aad u farabadan kuwaasi oo ku qeylinayo ereyo ka dhan ah siyaasadda Mareykanka,sidoo kale dadkani waxaa ay dabqabadsiiyeen sawirka madaxweyne Donald Trump taasi oo muujinaysa sida ay uga soo horjeedaan in Uhuudda loo gacan geliyo magaalada Barakaysan ee Qudus.
Guud ahaan waxaa Albaabada u laaban goobaha ganacsi,Iskuulada iyo xafiisyada shaqo, si dadku ay uga dhiidhiyaan qadiyadda magaalada Qudus,dibadbaxayaasha, ayaa wadooyinka ku gubay taayeero, sidoo kalena waxay dab qabadsiiyeen calamada Mareykanka, Israel iyo weliba sawirada Madaxweynaha Mareykanka iyo Ra’iisal Wasaaraha Uhuudda,taasi oo ku dareensiinaysa heerkja ay taagan yihiin shacabka reer Falastiin.
Wadamada Caalamka islaamka ayaa waxaa siweyn looga dareemayaa caro xoogan oo ka dhalatay go’aanka madaxweyne Donald Trump,uu Qudus ugu gacan gelinayo Uhuudda,waxaana la filayaa in banana baxyo ballaaran ay ka dhacaan wadamada Muslimiinta.
Hoggaamiyaasha wadamada Islaamka ayaa lafilayaa in go’aano ay ka soo saaraan arrimahaasi,iyadoomadaxweynaha Dalka Turkiga Ordugan uu shir deg deg ah isugu yeeray madaxda dallaka Islaamka,si ay uga falceliyaan talaabada Madaxweyne Donald Trump.
Previous articleAqalka cad ee Maraykanka oo ku kala qaybsan arrinta Quddus
Next articleMaxaad ka taqaanaa Taariikhda fog ee magaalada Barakeysan ee Qudus?